EX - ABSDF: "မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော် ဘယ်သူတွေဝါးမျိုသွားလဲ"
Kyaw Naing Win's photo.
ကျွန်တော်တို့ အညာသူအညာသား အထူးသဖြင့် မန္တလေး သူ၊သားတွေကို အခြားဒေသက
လူတွေက ဒေသစွဲ၊ ဇာတိစွဲကြီးတယ်လို့ပြောကြတယ်။ သူတို့ပြောမယ်ဆိုလည်းပြောလောက်စရာပါ ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးသားတွေက အခြားဒေသကလူတွေ မျက်စိဆံပင်မွေးစူးလောက်အောင် ကို ဒေသအပေါ် ချစ်စိတ်၊ စွဲလန်းစိတ်ကြီးလွန်းပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက် ဒေသစွဲ၊
ဇာတိစွဲကြီးရသလဲလို့မေးလာခဲ့ရင် စွဲစရာတွေ ချစ်စရာတွေ
လွမ်းစရာတွေရှိလို့ပေါ့လို့ပဲဖြေရမှာပဲ . .
မြန်မာပြည် နောက်ဆုံးဘုရင်မင်းဆက် အဆုံးသတ်ရာ
ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ နေလို လလိုထွန်းကားရာမြို့၊ သဘင်အနုပညာတွေ
ထွန်းကားရာမြို့၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးစသဖြင့် ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်
ဂုဏ်ယူစရာတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့မြို့၊ ပဉ္စမသင်္ဂါယနာတင် ပိဋိကတ်သုံးပုံ
ကျောက်စာရေးထိုးထားတဲ့ ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစာအုပ်ကြီးတည်ရှိရာမြို့၊ မဟာမုနိ
ရွှေကျီးမြင် ကျောက်တော်ကြီး ချမ်းသာကြီးစတဲ့ တန်ခိုးကြီးဘုရားတွေ
ကြီးလေးကြီးနဲ့ခမ်းနားတဲ့မြို့ပါ။ ကျုံးပြသာဒ် မြို့ရိုးကြီးတွေ၊
မန်းလေးတောင်၊ ဈေးချို၊ ဦးပိန်တံတား၊ စသဖြင့်သမိုင်းဝင်နေရာတွင်
ပြောလို့မကုန်နိုင်အောင် ချစ်စရာတွေ၊ လွမ်းစရာတွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့
ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးမြို့ကို ကျွန်တော်တို့ ဒေသစွဲကြီးကြတာ ချစ်ကြတာ
မဆန်းဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ မန္တလေးမြို့ကို မန္တလေးသားတွေ့ရဲ့
အသွေးတွေအသားတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထာတယ်လို့ ပြောမယ်ဆိုရင်တောင်
ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးမြို့ကို မန်းလေးသားတွေမှချစ်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး
မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးက ချစ်ကြ တန်းဖိုးထားကြပါတယ်။ ကုန်ကုန်ပြောရရင်
မန်းလေးကို ရောက်ဖူးတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေတောင် စွဲစွဲလန်းလန်း
စကားပြောဖြစ်တိုင်း မန္တလေးကို လွမ်းတဲ့အကြောင်း မြို့သူ၊ မြို့သားတွေက
ခင်ဖို့ကောင်းတယ်၊ ချစ်စရာကောင်းတယ် ဖော်ရွေတယ်လို့ အမြဲပြောကြတယ်။
မန္တလေးမြို့ဟာ ကမ္ဘာ့ဖော်ရွေမှုအရှိဆုံးမြို့များထဲက မြို့တစ်မြို့အဖြစ်
ကမ္ဘာကျော် ခရီးသွားမဂ္ဂဇင်း (Conde Nest Traveller) နဲ့ CNN
သတင်းဌာနတို့ကတောင် သတ်မှတ် ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကြောင့်
မန္တလေးသားတွေဟာလည်း ကိုယ့်မြို့အပေါ်မှာ ဂုဏ်ယူခဲ့
ယနေ့အချိန်အခါမှာတော့ မန္တလေးတွေဟာ ကိုယ့်မြို့အပေါ်မှာ ဂုဏ်မယူနိုင်
မ၀င့်ကြွားနိုင်တော့ပါဘူး။ မန္တလေးမြို့ကို မန်းလေးသားတွေ
မပိုင်တော့ဘူးလို့ ခံစားသွားရပါပြီ။ သူစိမ်းတစ်ယောက်လို
ဧည့်သည်တစ်ယောက်လိုခံစားသွားရပါပြီ။ အိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ မန္တလေးသားတွေက
မြို့ထဲမှာ မရှိတော့ပဲ မြို့ရဲ့အစွန်အဖျားတွေကို
ရောက်ကုန်ကြပါပြီ။ အိမ်ရှင်နေရာကို မြန်မာစကားမတက်တဲ့ အရှေ့တိုင်းဆီက
ကျည်တစ်တောင့်မကုန်လိုက်ရဘဲ ယွမ်ကျည်ဆံတွေနဲ့ သိမ်းပိုက်လိုက်တာ
အဲဒီရဲ့ အစကတော့ စစ်အစိုးရတက်ပြီး မန္တလေးကို မြို့သစ်တည်ရာကစပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်လောက်မှာပဲ အခြေချနေထိုင်တဲ့တရုတ်တွေဟာ အဲဒီအခွင့်အရေးကိုအရယူပြီး မန္တလေးကို စဆင်းပြီးခြေကုတ်ယူလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် မန္တလေး မြို့တော်ဝန်ရာထူးကို ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးဝန်ကြီး ဦးလွန်းမောင်ကိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ မြို့လယ်က မီးရထားဝိုင်းကို ခေတ်မှီဈေးကြီးဆောင်မယ်ဆိုပြီး တရုတ်တွေလက်ထဲကို ၀ကွက်အပ်လိုက်ပါတော့တယ်။ မန္တလေးမြို့လယ်ခေါင်မှာ မြန်မာတွေပိုင်တဲ့ နေရာဆိုလို့
နန်းတွင်းကြီးပဲရှိပါတော့တယ်။ ဒါတောင်စစ်တပ်ကသိမ်းထားပြီးမရောင်းလို့ပါ။ ရောင်းရင်တရုတ်တွေက
"အရင်က အရဟံ၊ နဘယံ အိမ်အ၀င်ဝတွေမှာရေးထိုးထားထားတဲ့
အိမ်ခြံဝန်းတွေနေရာမှာ နီနီရဲရဲ ဘူးသီကြော်ငါးပေါင်းတရုတ်စာလုံးတွေ
ကပ်ထားတဲ့ တိုက်အမြင့်ကြီးတွေ အစားထိုးဝင်ရောက်သွားပြီ။ ဘုရားစင်က
ဦးတီပွားတို့နေရာယူသွားကြ တာကတော့ စိတ်မကောင်း ၀မ်းနည်းစရာပဲ။
မြန်မာပြည်ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနောက်ဆုံးပင်မစခန်းကြီး အသိမ်းပိုက်ခံလိုက်ရတာကနေ
ယဉ်ကျေးမှုခံတပ်ငယ်တွေဖြစ်တဲ့ အင်းဝ၊ တံတားဦး စတဲ့စခန်းတွေပါ
ဟု ဆရာကြီး ဦးကိုလေး (အင်းဝဂုဏ်ရည်) ကပြောပါတယ်။
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော် မန္တလေးမြို့ကြီးကို တရုတ်တွေဘာကြောင့်
သိမ်းပိုက်နေရာယူသွား နိုင်ခဲ့တာလဲ။ ၁၉၈၉၊ ၉၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း
စစ်အာဏာရှင်လက်ထက် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် တန်းခိုးထွားနေတဲ့အချိန်မှာ
တ၇ုတ်တွေဝင်ရောက်နေရာယူတဲ့အချိန်မှာ အခြေနေပိုးဆိုးလာခဲ့တော့တာပါပဲ။ အဲ့ဒီအချိန်က မန္တလေးမြို့ဟာ ၁၉၈၁၊ ၈၄ ခုနှစ်တို့ မှာ အကြီးအကျယ်လောင်ခဲ့ရတဲ့
မီးကြောင့် ပြာပုံဘ၀ကနေ ရုံးထနေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ
မတရားသောနည်းလမ်းတွေနဲ့ ချမ်းသာလာတဲ့ တရုတ်တွေဟာ မြို့လယ်ခေါင်က ကောင်းပေ့ညွန့်ပေ့ဆိုတဲ့နေရာတွေကို မတန်တဆဈေးတွေပေးပြီး အနိုင်ကျင့်သိမ်းပိုက်လိုက်တာပါပဲ။
မန္တလေးမြို့ကျဆုံးရတဲ့ အဓိကတရားခံကဘယ်သူလဲလို့ စဉ်းစားကြည့်တော့
"စစ်တိုက်တက်ရင် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်အာရှင်တွေရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းခဲ့လို့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အလုံးစုံပျက်စီသွားပြီး အဲဒီအထဲမှာမှ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် မြို့တော်ကြီးဖြစ်တဲ့ မန္တလေးမြို့ကြီးဟာ တိုင်းတပါးသားတွေရဲ့လက်ထဲရောက် သွားရတာပဲ" ဟု မန္တလေးမြို့ခံစာရေးဆရာ ဦးဘုန်း(ဓာတု)ကပြောကြားခဲ့သည်။
ဒီနေ့မန္တလေးမြို့မှာ နေထိုင်နေတဲ့ မြန်မာစကားမတက်တဲ့တရုတ်တွေဘာကြောင့်
တဖြည်းဖြည်းများလာခဲ့ရတာလဲ။ သူတို့ဆီမှာ မှတ်ပုံတင်ကတ်
ဘာကြောင့်ကိုင်ဆောင်နေနိုင်ရတာလဲ။ အဖြေကရှင်းရှင်းလေးပါ။ ခေတ်အဆက်ဆက်
အကျင့်ပျက်ခြစားခဲ့တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ အုပ်ချုပ်မှုညံ့ဖျင်းခဲ့တဲ့
အစိုးရကြောင့်ဆိုတာ ပြေးကြည့်နေစရာမလိုပါဘူး။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်အရှေ့ပိုင်းက
မြို့လူဦးရေရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာရှိခဲ့တဲ့ တရုတ်တွေဟာ ယနေ့အချိန်ခါမှာ မြို့လူဦးရေရဲ့ ထက်ဝက်ကျော်ရှိနေပါပြီ။ ဒီလိုတရားမ၀င်တဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကို
ကိုယ့်နိုင်ငံသားစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ မြို့ခံမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အိမ်ကို ဧည့်စာရင်းဝင်စစ်ရဲပေမယ့် တိုက်ကြီးကြီး ခြံကြီးကြီးတွေနဲ့ မြို့လယ်ခေါင်တက်ပြီးပေါ်ပေါ်ထင်ထင် နေနေကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတရုတ်တွေကိုကြတော့ ဧည့်စာရင်းမပြောနဲ့ ခြံရှေရပ်ပြီး အိမ်အရိပ်တောင်မနင်းဝံ့ကြပါဘူး။
မြန်မာစကားတစ်လုံးမှမတက်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတရုတ်တွေဟာ အိမ်ခြံမြေတွေကို
၀ယ်ယူခွင့်ရနေကြပါတယ် ။ လမ်း ၃၀ ပေါ်မှာ၇ှိတဲ့ မြေစာရင်းဦးစီးဌာနမှာ
ပိုက်ဆံတွေ ဆာလာအိတ်ကြီးတွေနဲ့ထည့်ပြီး အိမ်ခြံမြေ၀ယ်ယူနေသူတွေဟာ
မြန်မာစကားမတက်တဲ့ တရုတ်တွေချည်းပါပဲ။ စည်ပင်ရုံးထဲက မြေယာဌာနမှာဆိုလည်း တရုတ်တွေနဲ့ပြည့်နေတာပါပဲ။ တစ်ချို့ဝန်ထမ်းတွေဆို တရုတ်တွေနဲ့တောင်ခင်မင်ရင်းနှီးပြီး ဆွေမျိုးတွေလိုတောင်ဖြစ်လို့နေပါပြီ။
မြေစာရင်းရုံးနဲ့ စည်ပင်မြေယာဌာနက ၀န်ထမ်းတွေတောင် တရုတ်စကားပြောသင်တန်း ပေးရမလိုဖြစ်နေပါပြီ။
ကျွန်တော်ခုလိုပြောနေရတာ တရုတ်အားလုံးကို ဆန့်ကျင်ရေး၊
မုန်းတီးရေးပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးမြို့သူ
မြို့သူမြို့သားတွေဟာ ရှေးယခင်ကတည်က ဘာသာပေါင်းစုံ လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့
ငြိမ်းချမ်းစွာ အေးတူပူအမျှယှဉ်တွဲနေထိုင်လာခဲ့ကြတာ နှစ်ပေါင်း ၁၅၀
ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ အစွန်းရောက်ပြီး ငါ့လူမျိုးမှ ငါ့ဘာသာမှဆိုတာ မရှိပါဘူး။
မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ ဗလီတွေ၊ ချက်(စ်)ကျောင်းတွေ၊ တရုတ်ဘုံကျောင်းတွေရဲ့
အရေအတွက်ကို ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ ရှေးယခင်ကတည်းက ဘာသာခြားရယ်
လူမျိုးခြားရယ်ဆိုပြီး မရှိကြပဲ လက်ရည်တပြင်တည်း အေးတူပူအမျှနေလာခဲ့လို့
အားလုံးဟာ ဆွေးမျိုးအရင်းအခြာတွေလိုတောင်ဖြစ်နေကြပါပြီ။ နောက်ပိုင်းမှ
"တရုတ်မှာ နှစ်မျိုးရှိတယ်။ ရှေးယခင်ကတည်းက နေထိုင်လာတဲ့ Old Chinese
ဆိုတဲ့ တရုတ်လူမျိုးအဟောင်းနဲ့ New Chinese ဆိုတဲ့
တရုတ်လူမျိုးအသစ်ဆိုပြီးရှိတယ်။ Old Chinese
လေးစာမှုလည်းရှိကြတယ်။ ဟိုးရှေးဘုရင်တွေ လက်ထက်ကတည်းကနေလာခဲ့တဲ့
ဒို့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့ မြန်မာပြည်ဖွားတရုတ်တွေကိုတော့ လက်တွဲလို့ရတယ်
လေးစားလို့ရတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းခဲ့လို့
၀င်ရောက်လာတဲ့ New Chinese ခေါ် နအဖ Chinese ကတော့ သူတို့စီးပွားရေးအတွက်
ဂုတ်သွေးစုတ်ဖို့ ဒို့တိုင်းပြည်ကို ၀င်ရောက်လာတာပဲ"ဟု ဆရာ
ရှေးယခင်ကတည်းက အတူနေထိုင်လာတဲ့ တရုတ်တွေဟာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနားလည်းပြီး၊ လူမူရေး၊ ဘာသာရေး လုပ်ငန်းတွေမှာလည်း အားတက်သရောပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ မန္တလေးက သာသနိကအဆောက်အဦးတွေမှာ တရုတ်နံမည်တွေနဲ့
နောက်ပေါက် တရုတ်တွေကတော့ မြန်မာစကားတစ်လုံးမှ မတက်သလို
ယဉ်ကျေးမှုလည်းမရှိ လူမူရေးလုပ်ငန်း ဘာသာရေးလုပ်ငန်းကတော့ဝေးရောပဲ။
တိုက်အမြင့်ကြီးတွေတည် အုပ်တံတိုင်း အမြင့်ကြီးတွေခတ်ပြီး
ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မရောဘဲ သူတို့ဟာသူတို့ သီးခြားရပ်တည်နေထိုင်ကြတယ်။
အိမ်ရှင်ကိုစော်ကားတဲ့ အပြုအမူ အပြောအဆိုတွေ မတူသလိုမတန်သလို
ကိုယ့်နေရာလေးတင် ဖယ်ပေးလိုက်ရတာမဟုတ်ပါဘူး လူမူရေး၊ စီးပွားရေး ဘာသာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာ၊ ဘာသာစကားတွေပါ အ၀ါးမျိုခံလိုက်ရတာပါ။ အရင်ကတရုတ်တွေဟာ ဘာသာတရားကိုင်ရှိုင်းပြီး သံဃာတော်တွေကို မနက်တိုင်း ဆွမ်းလောင်းကြပါတယ်။ နောက်ရောက်လာတဲ့ တရုတ်တွေကတော့ ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်မှုမရှိတော့တော့တဲ့ အတွက်သံဃာတော်တွေဟာ သူတို့ဆွမ်းဒကာ၊ ဒကာမတွေရှိတဲ့ မြို့အစွန်ကို လာရောက်ဆွမ်းခံနေကြရရှာပါတယ်။ အရင်ကလို သံဃာတော်တွေ စီတန်းပြီးဆွမ်းခံကြွတာ၊ အဖိတ် ဥပုတ်နေ့တိုင်းဆွမ်းကြီးခံ လှည့်တဲ့
ဗုံတောင်အဖွဲ့တွေရဲ့ မြင်ကွင်းမျိုးက မြင်တွေ့ရဖို့ ခဲရင်းသွားပါပြီ။ အရင်က ဘုရားပွဲတော်မပြတ်တဲ့ မန္တလေးမြို့ဟာ သူတို့တွေလွမ်းမိုးပြီးတဲ့နောက်မှာ ဘုရားပွဲတော်တွေ သိပ်မလုပ်ကြတော့တဲ့အတွက် အငြိမ့်အဖွဲ့တွေ ဇာတ်အဖွဲ့တွေဟာလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လျော့နည်းလာပါပြီ။ ယခင်က သဘင်တက္ကသိုလ်လို့တင်စားခဲ့ရတဲ့ မြို့ဟာ ယနေ့အချိန်အခါမှာတော့ အငြိမ့်အဖွဲ့ဆိုရင် ၁ဖွဲ့ ၂ဖွဲ့ ပဲကျန်ပါတော့တယ်။
စီးပွားရေးဘက်မှာလည်းမန္တလေးမြို့ရဲ့ လုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့ ၉၀ရာခိုင်းနှုန်းဟာ တရုတ်တွေပိုင်ဆိုင်ကြပြီး မြန်မာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့လွမ်းမိုးမူ
ချယ်လှယ်မူကိုခံနေကြရပါတယ်။ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေ စူပါမားကတ်လုပ်ငန်းတွေ
ဟော်တယ်လုပ်ငန်းတွေဟာ တရုတ်တွေအများစုပိုင်ဆိုင်လာပါတယ်။ သူတို့လူမျိုးတွေ ဘယ်လောက်အင်အားကြီး လွမ်းမိုးလာသလဲဆိုရင် စည်ပင်သာယာကတောင် နာမည်ဆိုင်းဘုတ်တွေ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်တွေကို တရုတ်လိုမရေးဖို့ ဆိုပြီး အမိန့်ထုတ်ယူရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေပါပြီ။ နောက်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဗမာစကားတောင်ပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုအကြီးဆုံး ဌာနချုပ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ ဈေးချို၊
ကောက်ပဲသီးနှံကုန်စည်ဒိုင်တွေ၊ ကျောက်ဝိုင်းတွေမှာ တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့
တစ်ချို့ရေပေါ်ဆီလူတန်းစားတွေ ကပြောကြသေးတယ် ဒါဟာမန္တလေးသား
ပြောချင်တာက မန္တလေးသားဆိုတာဟာ ရှေးယခင်ကတည်းက ကောင်းရောင်း ကောင်းဝယ်နဲ့
မိရိုးဖလာ လုပ်ငန်းလေးတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပြီး ရိုးရိုးသားသားနဲ့ပဲ
ရှာဖွေစားသောက်တက်ကြပါတယ်။ ဘီယာဆိုင်တွေ စင်တင်တွေဖွင့်မစားတက်ပါဘူး။
ရှေ့ဘန်းပြ နောက်ကတစ်မျိုးလုပ်မစားတက်ကြပါဘူး ဟော်တယ်တွေ တည်းခိုခန်းတွေဖွင့် မာဆတ်ဆိုတဲ့ အနှိပ်ခန်းတွေ ဖွင့်ပြီးစီးပွားမရှာတက်ကြဘူးဗျ။
မူယစ်ဆေးဝါးလည်း ရောင်းမစားတက်ကြဘူး။ ပိုင်ရာဆိုင်ရာနဲ့ပေါင်းပြီး
ခေတ်ပျက်သူဌေးလည်း လုပ်မစားတက်ကြဘူး။ ယနေ့နိုင်ငံမှာ
အာဏာရှင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး ချမ်းသာနေတဲ့ ခရိုနီလူတန်းစားတွေထဲမှာ
မန္တလေးသားစစ်စစ် ဘယ်နှစ်ယောက်ပါလဲဆိုတာ ကြည့်တာနဲ့သိနိုင်မှာပါ။
မန္တလေးမြို့ဟာ မြန်မာအင်အားအများဆုံးမြို့၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်တွေထွန်းကားရာမြို့ဖြစ်ပြီး၊ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ဗဟိုချက်မဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံတွေကို ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီး မန္တလေးမြို့ကျဆုံးချင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံကျဆုံးခြင်းပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်။
မန္တလေးကျးဆုံးခြင်းဟာ မြန်မာပြည်ကျဆုံးခြင်းပဲ၊ မန္တလေးကို ကယ်တင်ခြင်းဟာလည်း မြန်မာပြည်ကယ်တင်ခြင်းပဲ" ဟု ဆရာ ဦးဘုန်း(ဓာတု)ကပြောသည်။
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာ သူ့ကျွန်ဘ၀ကလွတ်မြောက်တာ နှစ်ပေါင်း
(၆၀) ကျော်ခဲ့ပေမယ့် တရုတ်ရဲ့ ခေတ်သစ်ကိုလိုနီကျွန်ပြုခံထားရတာ
ယနေ့တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ဆင်းရဲတွင်းနက်ရခြင်းထဲက တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့
ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရပါတယ်။ ရှေးယခင်ကတည်းက ယနေ့အချိန်ထိ ကြည့်ကြည့်ပါ
တစ်ခုမှမခံစားရသေးပါဘူး။ ပြည်သူလူထုဟာ တရုတ်နိုင်ငံကလာရောက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှာကိုတောင် ကြောက်နေပါပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေပေါ်မြေအာက် သဘာဝသံယံဇာတတွေကို မတရားခိုးယူတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ စီမံကိန်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့ စာချုပ်တွေကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။
ပိုဆိုးလာတာက တရုတ်နိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သဘာဝသံယာဇာတ အဆီအနှစ်တွေကို မတရားရယူလို့အားမရသေးဘဲ မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်တွေပါ သူတို့နိုင်ငံ လိင်ကျွန်သားမယားအဖြစ်ပါ ယူဆောင်နေကြပါပြီ။ အဆီကိုစားလို့အသားကိုမျိုယုံသာမက အရိုးပါတောင်မချန် ယူဆောင်နေတာ
အားလုံးအသိပဲဖြစ်မှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကပင်မ စီးပွားရေးကို
ချုပ်ကိုင်ထားသားတွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကြီးပါပဲ။ နိုင်ငံရဲ့
စီမံကိန်းတွေမပါပါဘူး။ နည်းပညာအတက်ပညာ နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ စက်မှု
စီမံကိန်းတွေလုံးဝမပါပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သဘာဝသယံဇာတာအဆီအနှစ်ကို
ရယူမယ့် သဘာဝပတ်ဝန်ကျင်တွေပျက်စီးပြီး နောင်အနာဂတ်မှာ မြန်မာပြည်
ဒုက္ခဖြစ်ကျန်မယ့် ရေအားလျပ်စစ်စီမံကိန်းတို့၊ တောင်တွေဖြိုပြီးရယူတဲ့
ရင်နှီးမြှပ်နှံတာတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ တရုတ်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို
အချဉ်တကာ့အချဉ်ဆုံး လူ့ငတုံးများအဖြစ် သတ်မှတ်ဆက်ဆံလာခဲ့တာ
မတရားသောလုပ်ရပ်တွေကို အစိုးရကိုယ်တိုင်က လစ်လျူရှုခံထားရတာဟာ
အစိုးရအဖွဲ့ကပြောလိုက်ခြင်းဟာ တရုတ်ရဲ့ ကျေးကျွန်ဖြစ်နေပြီလို့
လူထုကိုယ်တိုင်ကခံစားနေရတယ်" ဟု ဦးဘုန်း(ဓာတု)ကပြောသည်။
အုပ်ချုပ်သူအစိုးရကလည်း "မြေမျိုလို့လူမျိုးမပြောက်၊ လူမျိုးမျိုမှ
လူမျိုးပျောက်မည်" ဆိုပြီး မစားရ ၀ခမန်းကြွေးကျော်ပြီး မန်းလေးကို
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟာလည်း ၂၀၁၂ခုနှစ်က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်
ပဋိပက္ခအပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက်တံခါး လုံခြုံရေးကိစ္စကိုပဲ
ရှေ့တန်းတင်နေကြတဲ့အချိန်မှာ အရှေ့ဘက်က တံတိုင်းကြီးပြိုကြပြီး
၀င်ရောက်လာတဲ့ ခေတ်သစ်ကိုလိုနီ တရုတ်တွေကိုကြမေ့လျော့နေကြပါတယ်။
" ကျွန်းသစ်တွေ၊ ရေနံတွေ၊ ကျောက်စိမ်းတွေပါသွားတာက ကိစ္စမရှိသေးဘူးကွ
ဒီထက်ဆိုးတာက အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝမ်းဗိုက်လို့ပြောလို့ရတဲ့
မြန်မာနိုင်ငံကိုတောင် နဲ့မြောက်ပိုင်းခြားလိုက်ပြီ။ ပြီးတော့
ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းနဲ့အပြိုင် ရန်ကုန်၊ မန်းလေး
အမြန်လမ်းမကြီးထက်ကောင်းတဲ့ ကားလမ်းမကြီးနဲ့ ရထားလမ်းကို
ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ တရုတ်ပြည်ထိဖောက်မယ်။ ခုဆိုရင်
သူတို့လူမျိုးတွေပဲပါတဲ့ စခန်းတွေဆောက်နေပြီ။ အဲဒီအချိန်ကြရင်တော့
သူတို့ပြည်ဖြစ်သွားပြီပဲကွ" ဟု ဆရာကြီးဦးကိုလေး(အင်းဝဂုဏ်ရည်)က ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းဝင်မြို့ကြီး တရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုကို
မန်းလေးမြို့ကြီးကိုပြန်လည်ကယ်တင်ဖို့၊ မြန်မာနိုင်ငံကို တရုတ်ရဲ့
အစိုးရမှာ အဓိကတာဝန်သလို တိုင်းသူပြည်သား မြို့သူမြို့သားတွေကလည်း
" ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ ဦးနေ၀င်းအာဏာသိမ်းတဲ့ အချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့
မြေယာတွေရဲ့ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ချစ်တီးကုလားတွေ ပိုင်ဆိုင်ကြတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ဦးနေ၀င်းက ချစ်တီးကုလားတွေကို အကုန်လုံးမောင်ထုတ်ခဲ့လို့
ကုလားတွေ သင်္ဘောတွေနဲ့ အတုံးအရုံး အိန္ဒိယကိုထွက်ပြေးကြတာ
ငါတောင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသေးတယ် ဒို့တည်ဆဲဥပဒေအရ အခုအစိုးရလက်ထက်ဖြစ်ဖြစ်
လုပ်ရဲဖို့ပဲလိုတာပါ။ ဘယ်နိုင်ငံဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်၊
အချိန်မှီပါသေးတယ်" ဟု ဦးကိုလေး (အင်းဝဂုဏ်ရည်)ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးဟာ မန္တလေးမြို့ကြီးကို သူ့တိုင်းသူပြည်သားတွေ
အေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်ဖို့အတွက် တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ အခုလို
သူတည်ထောင်ခဲ့တဲံ မန်းလေးမြို့ကြီးမှာ တိုင်းတစ်ပါးသားတွေနေ နေတာတွေ့ရင်
ဘယ်လောက်များ ရင်နာလိုက်မလဲမသိဘူး။ မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးကို
ကျွန်တော်မျက်နှာပူ အရှက်ရမိတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်လက်ထက်ကြမှ
ဒီလို ကမ္ဘာကျော် သမိုင်းဝင် ရတနာပုံ မန်းလေးမြို့ကြီးကို
ဒီနေ့အချိန်အခါမှ ကျွန်တော်တို့ မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ရင်
ဆင်ယာဉ် မြင်းယာဉ် လှဉ်းယာဉ်တို့ကိုစီးပြီး ၀င်းကြီးတွေခင်းလို့
ရှင်းလောင်းလှည့်ပြီး မဟာမုနိဘုရားကြီးကို ကန်တော့ခွင့်မှရကြပါဦးမလား .
ပိတ်လုံချည်အင်္ကျီ အဖြူတွေဝတ် ပိတ်စလွယ်တွေသိုင်းပြီး ၀တ်အသင်းသူ
အသင်းသားတွေရဲ့ စည်သံဗြောသံတွေကို ၀ါတွင်းအခါမှာ ကြားရမြင်ရပါဦးမလား။
'မန်းဆန်တယ်၊ နန်းဆန်တယ်' ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်ကျွန်တော်နဲ့
ချစ်စဖွယ်ပြောတက်တဲ့ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တဲ့ မန်းလေးသူတွေအစား စကတ်တို
ဘောင်းဘီတို ပေါင်တန်အဖွေးသားနဲ့ ကောင်းမလေးတွေ မြင်ရတော့မှာလား . . .
ထမင်းတလုတ်ကို သူတို့ သဒ္ဒါမှ စားရ တော့မှာလား . . .
မန်းသူပီပီ ပြုံးတဲ့မျက်နှာ၊ ချိုတဲ့စကားနဲ့ ဈေးရောင်းတက်တဲ့
ဈေးချိုသူတွေအစား သူတို့နဲ့ မတူသလိုမတန်သလို ဆက်ဆံခံရဦးမှာလား . . .
စာသင်စာချနေတဲ့ ဘုန်းကြီးကျာင်းတိုက်တွေနေရာမှာ အကော့အပျံအမိုးတွေနဲ့
တရုတ်ဘုံကျောင်းကြီးတွေ မြင်တွေ့ရတော့မှာလား . . .
မြို့မငြိမ်းရဲ့ ငွေငန်းကြီးနဲ့ မြို့မအသင်းကြီးရဲ့ လှည့်လည်ဖျော်ဖြေမှုအစား တရုတ်နဂါး အကတွေမြင်တွေ့ရတော့မှာလား. . .
တူးပို့တူးပို့ သင်္ကြန်သီချင်းတွေအစား တရုတ်သီချင်းတွေကြားရတော့မှာလား
အရှင်နှစ်ပါးပါတော်မူခဲ့တဲ့ ဂေါဝန်ဆိပ်ကိုကော လွမ်းလို့မှ သွားကြည့်ခွင့်ရပါဦးမလား . ..
သမိုင်းဝင် မန္တလေးမြို့ကြီးကို ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာပဲတွေ့မြင်ရပြီး၊ မန္တလေးသူ
မန္တလေးသားတွေဆိုတာ ပြတိုက်ထဲမှာ သွားကြည့်ရတော့မယ့် အဖြစ်မျိုးအဖြစ်ခံတော့မှာလား . . .
ခေတ်စနစ်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုကြောင့် အခိုက်အတန့့်  မန္တလေးမြို့ကြီးကို
ကျွန်တော်တို့ စွန့်လွတ်ခဲ့ရပေမယ့် တစ်ချိန်မှာ မန်းလေးသားတွေပိုင်တဲ့
မန္တလေးဖြစ်ရမယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးသားတွေ
မညံ့ဘူးဆိုတာ ရာဇ၀င်သမိုင်း သက်သေရှိပါတယ်။ နယ်ချဲ့ဖက်ဆစ်လက်အောက်
ထီးကျိုးစည်ပေါက် သူကျွန်ဘ၀ကနေလည်း ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်
ပြာပုံဘ၀ကနေလည်း ရုန်းထနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မန္တလေးမြို့ဆိုတာ ပြာပုံဘ၀က
အကြိမ်ကြိမ်နိုးထခဲ့တဲ့ ဖီးနစ်ငှက် မြို့ပါ။ကျွန်တော်တို့
မန္တလေးသားတွေမညံ့မပါဘူး။ မန္တလေးကို မန္တလေးတွေပဲ ပိုင်ရပါမယ်။
"ဒို့မြန်မာတွေ ဖတ်ဆစ်ဂျပန်တွေရဲ့ လက်အောက်ခံ သူ့ကျွန်ဘ၀ကနေ
ရုန်းထွက်ဖို့အတွက် 'ဖဆပလ' ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး
ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးဆိုပြီးဖွဲ့စည်းပြီး ငါတို့တွေကို ကျွန်လာပြုနေတဲ့
တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကို တွန်းလှန်ခဲ့သလို အခုချိန်ခါမှာလည်း
ငါတို့နိုင်ငံကို မတရားလာလုပ် ဂုတ်သွေးစုတ်နေတဲ့ တရားမ၀င် နိုင်ငံခြားသား
တရုတ်တွေကို 'တဆပလ' ဆိုပြီး တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေး ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး
ေ ကျော်ကြီး (MDY)
Posted by lu bo at 10:42 PM